Dagaalada Etoobiya oo logu baaqay Xabad Joojin | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dagaalada Etoobiya oo logu baaqay Xabad Joojin
Hay’adaha gargaarka ayaa ku baaqaya xabad joojin deg deg ah oo kumeel gaar ah oo laga sameeyo Itoobiya si loogu ogolaado gargaarka in la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee dagaalada saameeyeen.
Qaramadamidoobey waxay dooneysaa in la furo marino bini’aadantimo ka dib iska hor imaad u dhaxeeyay militariga Itoobiya iyo xoogag daacada u ah hogaanka siyaasada ee waqooyiga gobolka Tigreega oo socday laba todobaad
Boqolaal qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen iska horimaadka,Ugu yaraan 33,000 oo qaxooti ah ayaa horey uga soo talaabay xadka Itoobiya ay la wadaagaan Suudaan.
Hay’ada Qaxootiga ee Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay diyaarinayso ilaa 200,000 oo qof inay yimaadaan lixda bilood ee soo socota hadii dagaalku sii socdo.
Itoobiya ayaa ilaa iyo hada diiday dalabyada ku aadan wadahadalka dhibaatada, iyada oo u aragta howlaheeda mid ah “ficil sharci fulin” ah.
Dhibaatada Tigreega ee Itoobiya: Sheekada dheer, dhexdhexaad, iyo gaagaaban
Africa Live: Warar dheeraad ah oo ku saabsan qaaradda oo idil.
Xaqiiqda hubinta sawirada marin habaabinta ah ee dagaalada Ethiopia
Iska hor imaadkan ayaa salka ku haya xiisad muddo dheer soo jiitameysay oo u dhaxeeysa xisbiga gobolka awooda badan ee TPLF iyo Jabhadda TPLF iyo dowladda dhexe ee Itoobiya.
Markii ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu dib u dhigay doorasho qaran sababo la xiriira coronavirus bishii Juun, xiisadda ayaa ka dhex kacday labada koox. Kooxda TPLF waxay u aragtaa dawlada dhexe mid aan sharci ahayn, waxayna ku doodeysaa in Mr Abiy uusan awood dheeri ah uhayn inuu wadanka hogaamiyo.
Sidee ayay u xun tahay xaaladdu?
Hay’adaha gargaarka ayaan marin u helin aaga ay colaaduhu ka socdaan ee Itoobiya ee Tigray, laakiin waxay ka baqayaan in kumanaan rayid ah laga yaabo in la laayay tan iyo markii uu dagaalku qarxay bilowgii bishii Nofeembar.
Jimcihii, TPLF waxaa lagu eedeeyay inay gantaalo ku garaacday magaalada Bahir Dar ee gobolka dariska la ah ee Amxaarada. Dowlada Amxaarada ayaa sheegtay in uusan jirin wax khasaaro ah oo soo gaaray iyo waxyeelo uusan geysan
Laakiin dhacdadan la soo sheegay ee Amxaarada, oo muddo dheer muran xuduudeed uu kala dhaxeeyo Tigreega, ayaa dhalisay walaac laga qabo in isku dhacu uu isku balaadhiyo dagaal ballaadhan ka dib markii ciidamo gobol loo diray inay taageeraan ciidamada federaalka.
Dhibaatada Tigray: Maxaa looga baqayaa dagaal sokeeye oo ka dhaca Itoobiya
Horaantii todobaadkan, ciidamada Itoobiya waxay qabsadeen laba magaalo oo Tigray ah Mr Abiy wuxuu sheegay in ciidankiisu kusii
siqayaan caasimada Tigraay ee Mekelle. Wuxuu sidoo kale soo jeediyay in dagaalku uu soo afjarmayo, isagoo yiri “ficilkii ugu dambeeyay ee sharci fulinta waxaa la qaadi doonaa maalmaha soo socda”.
Dhanka kale, Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay qulqulka qaxootiga ku sii qulqulaya Suudaan, taasoo ay sheegeen inay khalkhal gelin karto xasiloonida ummad hore u taageertay qiyaastii milyan qof oo ka soo barakacay dalal kale oo Afrikaan ah.
Qaxootiga imanaya Suudaan oo badankood la rumeysan yahay inay yihiin caruur ayaa gaajaysan oo cabsi qaba, sida ay sheegeen hay’adaha gargaarku, xabad joojin deg deg ah ayaa u ogolaan doonta inay caawiyaan kumanaan rayid ah oo wali ku go’doonsan gudaha Itoobiya. Isha BBC Soomaali.
Previous articleMusharax Cabdikariin Guileyd oo kulan Caawa la qaatay Madaxweyne Qoor Qoor
Next articleHogaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame baaq soo saaray